Ahoana ny fampidinana eBooks maimaim-poana avy amin'ny Kindle Library mankany amin'ny PC | Ireo mpamaky rehetra
Ahoana ny fampidinana eBooks maimaim-poana avy amin'ny Kindle Library mankany amin'ny PC-nao
ny Amazon Kindle, amin'ny endriny samihafa, no eReaders be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao, misaotra ny ampahany amin'ny vidiny, nefa koa ny fahafaha-manao lehibe atolotry zareo antsika hahazo boky maro be amin'ny endrika nomerika, amin'ny vidin'ny be indrindra.
Mampalahelo fa tsy ny olon-drehetra no afaka na te handany vola be amin'ny iray amin'ireo fitaovan'ny Amazon, saingy tsy hanakana antsika tsy hankafy ny e-book izany. Ary anio dia hanazava amin'ny fomba tsotra isika Ahoana ny fampidinana eBooks maimaim-poana avy amin'ny Kindle Library mankany amin'ny PC-nao.
Raha te hankafy ireo ebook an'arivony maro atolotr'i Amazon anay ianao dia amboary ny solosainao ary hanome torohevitra mahasoa anao izahay raha tsy te hividy eReader ianao na tianao mamaky tsara kokoa ny solosainanao.
1 Sintomy ny fampiharana Kindle
2 Sintomy ny boky ilainao ary ankafizo amin'ny PC-nao
Sintomy ny fampiharana Kindle
Ny zavatra voalohany ilaintsika ahafahana misintona ny e-books avy amin'ny tranomboky Kindle mankany amin'ny solosaintsika dia ny Rindrambaiko Kindle izay azo alaina ho an'ny Windows sy OS X, ary azonao sintonina avy HERE. Mandeha tsy ilazana hoe maimaim-poana izy io ary, araka ny azonao antoka, azo alaina ihany koa ho an'ny ankamaroan'ny rafi-piasan'ny finday izy io, na dia anio fotsiny aza no hifantohantsika amin'ilay misy ho an'ny PC.
Raha vao sintonina dia tsy maintsy apetrakao ary ampidiro izany, ampidiro ny anaranao sy ny tenimiafinao izay ampiasainao matetika hividianana amin'ny Amazon na hampiasa ilay tranomboky mihitsy. Raha tsy mbola misy mpampiasa anao dia tsy maninona izany, azonao atao ny mamorona azy maimaim-poana. Araka ny hitanao amin'ity sary manaraka ity dia tokony hahita zavatra mitovitovy amin'izany ianao, na dia mety aseho somary hafa aza arakaraka ireo fanangonana noforoninao.
Ao amin'ny pejy lehibe dia afaka mahita ny boky rehetra ananantsika ao amin'ny tranombokintsika isika, raha manana izany. Azontsika atao ny manafatra azy ireo araka izay itiavantsika azy amin'ny alàlan'ny famoronana fanangonana na mamela azy rehetra hiaraka amin'ny tahiry lehibe izay aseho amin'ny toerana misy anao. Raha te hamaky ny boky efa anananao ao amin'ny tranomboky, kitiho indroa fotsiny eo..
Sintomy ny boky ilainao ary ankafizo amin'ny PC-nao
Raha nanapa-kevitra ianao fa tsy te-hividy Kindle na boky elektronika hafa, tsy maninona izany ary amin'ny alàlan'ny fisintomana ny rindrambaiko Kindle dia afaka maka sy mankafy ireo boky nomerika amin'ny PC-tsika isika, eny fa na dia ny famakiana azy amin'ny Internet aza.
Raha sambany ianao mampiasa app Amazon's Kindle dia manana safidy hanombohana miantsena na hahazo boky maimaimpoana mihitsy aza. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra amin'ilay kisary ianao, eo amin'ny zoro havanana ambony natao batemy tamin'ny anaran'ny "Kindle Store". Jereo ireo boky nomerika maro, ary safidio izay tianao indrindra. Raha ny momba anay dia nanapa-kevitra ny amin'ny "Ilay lehilahy malina saina Don Quixote de La Mancha" izay azonao sintonina maimaim-poana amin'ny Amazon izao.
Rehefa mahita boky tianao hovakiana ianao dia azonao ampiasaina ilay bokotra "Mividiana amin'ny tsindry iray" ary avy eo safidio ilay fitaovana tianao hitahiry azy. Raha ny aminay dia hifidy ny safidy Kindle ho an'ny Tu-User PC izahay. Raha vantany vao mahazo azy io isika dia afaka mahita azy io haingana ao amin'ny tranombokintsika ary manomboka mamaky azy. Raha tsy miseho ao amin'ny tranombokinao ilay boky voalaza etsy ambony dia tsy maintsy havaozinao izy io ary raha mbola tsy miseho izy dia tsy maintsy jerenao ny fividianana natao, satria raha tsy maintsy nandoa zavatra ianao amin'ilay boky, dia mety tsy nahomby ny fandoavam-bola ary tsy maintsy alaminao indray ny fomba fandoavanao vola handoavana tsara ny boky novidiana ary hahafahanao misintona azy ary mampiditra azy ao amin'ny tranombokinao.
Raha tsindrio avo roa heny amin'ilay boky resahina ianao dia azonao atao ny manomboka mamaky azy amin'ny interface iray mitovy amin'ny mpamaky rakitra PDF, na dia misy hitsin-dàlana maromaro sy safidy afaka manampy anao hiaina ny zavatra niainanao aza. Anisan'izy ireo no ahitantsika ny fanitsiana ny haben'ny endritsoratra, ny typeface, ny teny izay hiseho amin'ny tsipika tsirairay, ny famirapiratan'ny efijery na ny loko miloko.
Raha afaka mamaky azy io nefa tsy manana fifandraisana amin'ny tamba-jotra, dia ho ampy izay ampidirinao, izay hamonjy io boky nomerika manokana io, afaka mamaky azy io amin'ny fotoana sy toerana rehetra. Tokony holazainay aminao ihany koa fa raha mampiasa ity rindrambaiko ity amin'ny fitaovana hafa ianao dia tonga lafatra ny fampifanarahana satria raha manomboka mamaky boky amin'ny solosainao ianao dia afaka manohy amin'ny fotoana iray ihany amin'ny finday finday, takelaka na amin'ny fitaovana Kindle aza.
Ny fanoloran-tenan'i Amazon amin'ny famakiana nomerika dia tsy isalasalana ary ohatra mazava iray amin'izany ny rindranasa Kindle izay azonao sintonina amin'ny fomba ofisialy amin'ny smartphone, tablette na PC anao. Raha ny antsasaky ny orinasa tarihin'i Jeff Bezos, dia antsasany na tsy mieritreritra afa-tsy ny hitadiavana vola, dia tsy tokony hanomboka ity fampiharana ity, nanery ny mpampiasa hividy Kindle, zavatra sendra tsy nitranga.
Raha te-hamaky ianao dia tsy manana fialantsiny tsy hanaovanao izany ary izany dia satria i Amazon dia nanamora azy mora foana ho antsika, noho ny fampiharana Kindle sy ireo boky nomerika am-polony ampolony omeny maimaimpoana ary azonao atao ny misintona izao dia izao.
Nahavita nisintona sy nanomboka namaky ireo boky nomerika tianao amin'ny solosainao ve ianao noho ny fampiharana Amazon Kindle?. Lazao anay ny zavatra niainanao teny amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, ao amin'ny forum-ntsika na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay. Lazao anay ihany koa raha nanana fanontaniana na olana ianao nandritra izany ary hiezaka izahay hanampy anao araka izay tratra mba hahafahanao mamaky ireo boky ao amin'ny tranombokinao amin'ny PC-nao nefa tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Ahoana ny fampidinana eBooks maimaim-poana avy amin'ny Kindle Library mankany amin'ny PC-nao
saturnine dia hoy izy:
azoko atao ve ny misintona boky iray avy amin'ny amazon-kindle ary mamindra azy amin'ny folder amin'ny pc-ko avy eo afindra amin'ny kobbok ebbok iray? sa ampitao mivantana amin'ny ebook?
Mamaly an'i saturnine
Ireo boky 11 natolotr'i Obama hamaky azy ary tsy hamaky akory i Trump
Ny fahafinaretana mamaky eo amin'ny sofa milay